laura | Gcina A Isitimela
umbhali: Laura Thomas
ekhaya > Laura Thomas
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Eco uhambo friendly ephambili kweengqondo zethu njengoko singena kule minyaka ilishumi entsha. Nge ntliziyo zokusingqongileyo ezifana Robert Swan and Greta Thunberg, umyalezo ihlabathi unikelwa nge crystal ecacileyo. We are running out of time to…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Yurophu inspires abazobi kwaye filmmakers ukusuka jikelele ehlabathini, ngoko akumangalisi ukuba itsale abenzi bemiboniso ngokufanayo! Fumana 5 Famous Film Iindawo eYurophu ncwadi iiholide zakho kunye nemisebenzi hlala iifilimu owuthandayo ukuba iholide iphelele European…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu EMilan ukuya eRoma By Train okanye eRoma ukuya Milan kuyinto engamava lula kakuhle. Hayi umzekelo-icatshulwe beautiful! Ungathatha uloliwe ongabizi mali ininzi kunokuthatha ixesha elide kuneli 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…